Pool Break Pro 3D 2.3.6 ~ Mobile Knowledge
Pool Break Pro 3D 2.3.6
Posted on 9:14:00 PM by Ko Ye
★ New Game 7-Ball Pool
★ New Game 4-Ball billiards
★ Straight Pool floating ball fix
★ Visual updates
★ Minor fixes and improvements
★ Multi-touch cue controls
★ Hide score panels via long-press
★ Game UI updated
★ minor bug fixes and enhancements
★★ (SALE 33% OFF FOR A LIMITED TIME) ★★
For more Pool Break screenshots, visit: http://www.kineticbytes.com
Pool Break includes Online Chat that may be enabled or disabled or restricted to private networks anytime within the game. The messages are limited 150 characters per message.
Pool Break Pro 3D 2.3.6 on Google Play
Download Pool Break Pro 3D 2.3.6
အခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..Facebook Page လေးကိုတော့ LIKE ပေးသွားပါဗျာ..လိုအပ်တာတွေကိုလည်း C-box မှာ မှာကြားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Download လုပ်နည်း။ ** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။
Posted in Android Game | No comments
ယခုဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသော တချို့ပိုစ်များသည် တခြားဆိုဒ်များ မှကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံ ကူယူထားသော မူရင်းဆိုဒ်များကို ဖော်ပြဖို့မေ့ခဲ့ရင် တတ်သိပြီးသားသူများအနေဖြင့် နာလည်ပေးကြပါရန် ။တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွှန်တော်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်လိုရတဲ့ ဖိုင်များကိုတာ တင်ပေးပါသည်ကျွန်တော် တော်လို့တတ်လို့မဟုတ်ပါ သိသလောက်ပြန်လည်ဝေမျှနေတာပါ။ ကျွှန်နော့်ဆိုဒ်က အသုံးဝင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိသွားတယ်ဆိုရင် အင်မတန်မှ ၀မ်းသာကြည်နှုးမိပါတယ်။ ဆက်လက်ကြိုးစားနေပါအုံးမယ်။ အခုနောက်ပိုင်း တင်သမျှ Hardware အကြောင်းကို တစ်ခုမှ နားမလည်ပါ တစ်ခြားသူတွေ အဆင်ပြေအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Fb Like ဖို့တောင်းဆိုပါရစေ
Android Flashtool Firmware
Android Full Firmware
Nokia Myanmar Font
Admin - Ye Htut Naung . Powered by Blogger.
Copyright © Mobile Knowledge | Powered by Blogger